Mareykanka Oo Faah Faahin ka bixiye duqeyn ay ka gaysteen G.Shabeelaha hoose. | Warsiman
Mareykanka Oo Faah Faahin ka bixiye duqeyn ay ka gaysteen G.Shabeelaha hoose.
Published on February 6, 2019 by Daud Osman · No Comments
Taliska Ciiddanka Maraykanka ka jooga Qaaradda Afrika ee AFRICOM waxay sheegeen in 2 Duqeyn oo dhanka circa ah ay ku qaadeen Al-Shabaab 48-kii saacadood ee la soo dhaafay.
Hadal-qoraal oo uu AFRICOM soo saaray ayuu ku sheegay iyagoo taageero siinaya Ciiddanka DFS Somalia inay bishan 3-dii qaadeen Duqeyn ay la beegsadeen fariisin ay Al-Shabaab ku leeyihiin Degaanka Gendershe ee Gobalka Sh/hoose, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Taliska Ciiddanka Maraykanka ka jooga Qaaradda Afrika ee AFRICOM waxay sheegeen inay 2 Duqeyn dhanka cirka ku qaadeen Al-Shabaab 48-kii saacadood ee la soo dhaafay.
Hadal-qoraal oo uu AFRICOM soo saaray ayuu ku sheegay iyagoo taageero siinaya Ciiddanka DFS inay bishan 3-dii qaadeen Duqeyn ay la beegsadeen fariisin ay Al-Shabaab ku leeyihiin Degaanka Gendershe ee Gobalka Sh/hoose, waa sida ay hadalka u dhigeen.
AFRICOM waxay kaloo sheegeen inay bishan Feberaayo 5-teedii ay duqeyn kale ka geysteen meel ku dhow Deegaanka Leego ee Gobalka Sh/hoose.
Hadalka qoraalka ee AFRICOM waxay ku sheegeen inaysan dad rayid ah khasaaro ka soo gaarin Duqeymahaasi waa sida ay hadalka u dhigeenAFRICOM waxay kaloo sheegeen inay bishan Feberaayo 5-dii ay duqeyn kale ka geysteen meel ku dhow Deegaanka Leego ee Gobalka Sh/hoose.
Hadalka qoraalka ee AFRICOM waxay ku sheegeen inaysan dad rayid ah khasaaro ka soo gaarin Duqeymahaasi waa sida ay hadalka u dhigeen